Voina teny Tsaralalana :: Mpiasa nianjera avy teny amin’ny rihana voalohany • AoRaha
Voina teny Tsaralalana Mpiasa nianjera avy teny amin’ny rihana voalohany
Tsy nahatsiaro tena ity lehilahy mpanao trano nianjera avy teny amin’ny rihana voalohan’ny trano lehibe iray, teny Tsaralalàna, omaly tolakandro. Manaraka fitsaboana teny amin’ny hopitaly nitondrana azy haingana izy, hatramin’ny omaly hariva.
Nifamonjena haingana io lehilahy, 33 taona, tradoza teo am-perinasa io. Ny fiara fitondrana marary an’ny sampana mpamonjy voina teo akaiky teo no nitondrana azy nihazo ny hopitaly Joseph Ravoahanagy Andrianavalona (HJRA). “Nampiasa fiarovana ihany saingy tsy nametaka azy araka ny tokony ho izy ilay mpiasa. Vaky noho ny fianjerana teo an-tsisin’arabe ny tatamasony ”, hoy ny mpamonjy voina tonga teny an-toerana.
Efa nisy mpiasa tra-doza tahaka izao teo amin’io trano lehibe io, tamin’ny novambra 2019. Mpiasa iray ihany koa no niharam-boina nianjera avy teny amin’ny rihana fahatelo. Tapaka tamin’izany ny tongony ilany.
Dobo an-drano tany Vatomandry :: Hita ny razana faninefany natelin’ny ranomasina
Herisetra ara-pananahana :: Fatina tovovavy voafono tao an-tranom-bazaha